Gudoomiyaha Jaamacadda Hargeysa oo Dugsi U Gaara Hargeysa Ka Furtay & Milicsiga Musuqmaasuqii Lagu Eedayn Jiray | Baligubadlemedia.com
Gudoomiyaha Jaamacadda Hargeysa oo Dugsi U Gaara Hargeysa Ka Furtay & Milicsiga Musuqmaasuqii Lagu Eedayn Jiray
October 21, 2014 - Written by editor
Hargeysa (BGM) Xaflad lagu daah-furayay Dugsi cusub oo casri ah oo aan hore noociisa oo kale dalka looga hirgalin ayaa Habeen hore lagu qabtay Huteel Crown ee magaalada Hargeysa.
Xafladan lagu shaacinayay furitaanka Dugsigan aanu noociisu hore dalka Somaliland uga jirin, kaas oo loogu talo galay sidii loogu barbarian lahaa islamarkaana kor loogu qaadi lahaa daýarta
reer somaliland ee fursada u hesha ayaa waxa ka soo qayb-galay dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin qurbo-jooga reer Somaliland, xubno ka tirsan maamulka jaamacadaha dalka qaarkood iyo Agaasimaha Tacliilnta Sare ee Wasaaradda Waxbarashada.
Guddoomiyaha Dugsigan Casriga ah Dr. Cabdi Huseen Gaas, islamarkaana ah gudoomiyaha jaamacadda hargeysa oo ugu horayn ka hadlay furitaankii xafladda daahfurka Dugsigan gaarka loo leeyahay oo la magac baxay International Academy for Educational Excellent, ayaa ka warbixiyey ujeeddada dugsigan gaarka loo leeyahay uu u sameeyey aanay ahayn in uu lacag ka faa’iido, balse ay tahay in uu dhiso garaadka iyo aqoonta dayarta.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale ka waramay dusigan International Academy for Educational Excellent, (IAEE), in fasaladda uu ka koobanaan doono noqon doonaan kuwo ku haboon habka waxbarashada, isagoo sheegay in fasalkiiba ay wax ku dhigan doonaa 35 arday oo kaliya, isla markaana ay wax u dhigi doonaan, barina doonaan laba macali fasal kasta.
Guddoomiye Gaas waxa kale oo uu ka war bixiyay in Macalimiinta dugsigan ka hawl-geli doontaa ay noqon doonaan macalimiin aqoontoodu sarayso, kuna xeel dheer qaababka iyo noocyada casriga ah ee caruurta loo dhiso garaadkooda iyo aqoontooda.
si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha jaamacadda hargeysa oo in dhawayd-ba lagu eedaynaayay musuqmaasuq baahsan oo uu ku kacay mudadii uu jaamacada madaxda ka ahaa ayaa u muuqda mid lacagtii uu musuqmaasuqay hargeysa kaga furtay dugsi u gaara arintaas oo fadeexad wayn ku ah gaas